यस कारण बढ्यो तरकारीको मूल्य ! | khaltinews.com
यस कारण बढ्यो तरकारीको मूल्य !
काठमाडौँ । देशको ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा तरकारीप्रतिको परनिर्भरता घट्नुको साटो बढेको पाइएको छ । देशको केन्द्रीय तरकारी बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिले सार्वजानिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आलुको परनिर्भरता बढेको छ ।
समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा उपत्यकावासीको मागको ५५ प्रतिशत आलु भारतबाट आयात गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को पहिलो छ महिनामा मागको लगभग ७० प्रतिशत माग भारतको आलुले धानेको छ । हरेक तरकारीमा यस्तै परनिर्भरता बढेको छ । कोरोनाका कारण स्वदेशमा उत्पादन भएको तरकारी महँगो हुने र भारतबाट आउने तरकारी सस्तो हुने भएपछि भारतीय तरकारी नै बढी आयात भएको हो ।
समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा दुई लाख ४६ हजार १४० मेट्रिक टन (लगभग ३६ प्रतिशत) तरकारी भारतबाट आएकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा एक लाख चार हजार १२४ मेट्रिक टन (लगभग ४० प्रतिशत) तरकारी भारतबाट भित्रिएको छ ।
कालीमाटी तरकारी बजार व्यवसायी संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले यस पटक बजारमा आलुको अधिकांश माग भारतीय बजारले धानेको बताए । यस पटक आलुका पकेट क्षेत्रमै आलु उत्पादन गरिएन, कोरोना भन्दै सबैलाई घरभित्रै थुनियो, आयात बढ्यो भनेर के गर्नु उनले प्रश्न गरे ।
कम आपूर्ति मुख्य कारणयो वर्ष कोरोनाका कारण तरकारी उत्पादनमा नै असर परेको छ । बजारमा तरकारीको माग बर्सेनि बढेको छ तर सोअनुसार तरकारी आपूर्ति नहुँदा तरकारीको भाउ पुस महिनासम्म महँगो भएको थियो । अहिले भने क्रमशः तरकारीको भाउ घटेको छ । समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्टले हाल औसत दैनिक ६५० मेट्रिक टनसम्म तरकारी बजारमा भित्रिएको जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्म बजारमा उपत्यकावासीको मागअनुसार नआउँदा भाउ निरन्तर उकालो लागे पनि अब भने सस्तो हुने सङ्केत देखिएको उनको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा बजारमा एक लाख चार हजार १२४ मेट्रिक टन तरकारी भित्रिएको छ जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा एक लाख ५२ हजार २६० मेट्रिक टन तरकारी भित्रिएको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा ४८ हजार १३६ मेट्रिक टन कम तरकारी भित्रिएको छ । यो तथ्याङ्क हेर्दा तरकारीको आयात क्रमशः घटेको देखिएको छ । समितिका अनुसार आर्थिक वर्षमा २०७५-०७६ मा दुई लाख ८५ हजार ८९२ मेट्रिक टन तरकारी बजारमा भित्रिएको थियो । तरकारीको माग क्रमशः बढे पनि गत वर्ष चैतदेखि नै कोरोनाका कारण तरकारी आयात घटेको छ ।